Yintoni kunye nendlela yokwenza itshathi yeGantt yezivumelwano zakho | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Lua louro | | ngokubanzi
Itshathi yeGantt, ihlala iyilelwe kakubi, inokuba sisizathu esihle sokuxhaphaza ubuchule bethu
La Itshathi yeGantt Ayisiyonto ngaphandle kweshedyuli ebonakalayo ekuvumela ukuba ukwazi ngokukhawuleza ukudlula ngexesha leprojekthi ethile. Olu luhlobo lwe-infographic apho yonke imisebenzi ehambelana neprojekthi ngokubanzi ichaziwe kwaye yahlulwa, inxulunyaniswa nemihla yokuqalwa kwayo neyokuphela.
Olu xwebhu luya kuvumela bobabini umthengi kunye neengcali (ngubani onokuba ngumyili) ukuba azi amaxesha okuhambisa kuchazwe i-priori. Ukuba awuyazi indlela yokwenza itshathi yeGantt okanye ongazange wayibona, funda njalo.
1 Uyenza njani itshathi yeGantt
1.1 Inyathelo lokuqala: ngawaphi amagama oza kubandakanya
Uyenza njani itshathi yeGantt
Ihlala yenziwe kwi-Excel ukulungiselela ukusebenza kweeseli kunye nokukwazi ukugcwalisa umbala ngokukhawuleza. Kodwa masicace gca: Ngaba asingabo abayili? Kulungile masiyile. Masingawi ngenxa ye-aesthetics ekrwada kunye nehlwempuzekileyo ehlala ilawula kulo naluphi na uxwebhu olubalaseleyo, kwaye masizame uyilo ngeso lengqondo itshathi yethu yeGantt. Singacinga ngoyilo esiza kulusebenzisa kuzo zonke ezinye ekufuneka sizenzile, kwaye silusebenzise njengetemplate kuwo wonke umsebenzi wethu. Masicinge ukuba uxwebhu ngalunye oluhanjisiweyo / olwenziweyo kufuneka lusebenze njenge ileta yeenkonzo zethu: masenze eyona nto siyenzayo, masiyile.
Inyathelo lokuqala: ngawaphi amagama oza kubandakanya
Ngokucacileyo, kuxhomekeke kwiprojekthi eza kuphuhliswa, siya kufuna elinye okanye amanye amagama okanye inkqubo yombutho. Yintoni eya kuba yinto eqhelekileyo kuzo zonke iitshathi zethu zeGantt Umda wexeshaNgokubanzi, iinyanga neeveki ziyaboniswa. Ukucacisa ngakumbi, kwaye ukuba siqinisekile ngomhla esiza kuwugqiba ngawo umsebenzi ngamnye, sinokubandakanya neentsuku.
Ukujongana nexesha, kuya kufuneka simisele imisebenzi ekufuneka iphuhlisiwe. Ukuba siyinxalenye yeqela leengcali, sinokuchaza igama lokuba ngubani oza kukhathalela umntu ngamnye. Singaquka neentsuku zeshishini eziza kusithatha ukugqiba lo msebenzi.
Yiba sengqiqweni Ngexesha elimisiweyo, sukufuna ukukholisa umthengi. Ixesha eliza kuthathwa ngumsebenzi liyakucaciswa ngumthwalo onawo ngeli xesha, ungalibali.
Iinkcukacha kunye ukucoca ukuya kwelona liphezulu inkqubo, umsebenzi ngamnye. Ukuthengwa kweemveliso, imizobo, ulwamkelo kunye nokulungiswa kwabathengi ...
Itshathi yeGantt icacisa thina nomthengi imihla ebekiweyo yokugqitywa kunye nokuhanjiswa. Oko kubiza thina ukuthobela oko sikubeke kuyo kuya kusixelela ukuba kulungile kangakanani (okanye kubi) sihlela ixesha lethu. Khumbula ukuba sabhala iposti malunga iinkqubo eziza kukunceda ulawule ixesha lakho.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Imihla emiselweyo: yoyikiso yoyilo loyilo, Iinkqubo ezi-3 zokulawula ixesha lakho
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Yintoni kunye nendlela yokwenza itshathi yeGantt ukubandakanya kwizivumelwano zakho